Waa maxay da'da Best si aad u hesho imtixaanka indha la 'Color? - 💡💻 Iris - Software badbaadinta Eye, Caafimaadka iyo wax soo saarka 🛌👀
Waa maxay da'da Best si aad u hesho imtixaanka indha la 'Color?
indho Color waxaa sidoo kale loo yaqaan deficiency midabada. Sababo la indho midabka, qofka aan awoodin in ay aqoonsadaan midabo.
Sida caadiga ah, qof ma kala saari karaa midabka cas iyo cagaar.
Way adag tahay in la helo calaamadaha hore ee indho midabka ah ee ilmahaaga.
Carruurtu waxay leeyihiin taako yar ee dareenka marka ay ku tuuraan midabo on warqada.
hal ilmo oo keliya waxaa saameyn ku indho midab ee ku saabsan 25 carruurta.
Sababo la indho midabka, cunug uu leeyahay ah wax habeennimo fiican.
Carruurtu waxay leeyihiin arrimaha halka reading iyada oo pages midabka sida iyada oo pages cagaaran ama casaan maxaa yeelay waxa ay ka tarjumaysaa iyada oo iyagoo indhaha iyo waxay ka caban ku saabsan, indhahoodu lulmay.
indho Color inta badan sababa cudurka hidde.
The "loo yaqaano" ayaa ka mas'uul ah midabada kuwaas oo ku yaalla xagga dambe ee isha ku.
Sabab u la'aanta unugyada loo yaqaano, ilmaha waa dhalashada indhabbeel midabka. Sida laga soo xigtay duugmo Dhakhaatiirta of Washington agagaarka 8%, wiilasha oo ay saameeyeen indho midabka kaas oo ka yar yahay gabdhaha.
Waxaa loola jeedaa in ratio ee indho midab wiilasha waa ka badan gabdhaha. Way adag tahay in la ogaado midabada markii xoojinta iftiin yar yahay.
Marka ilmuhu waa 4 sano bilood loo yaqaano waxaa bilaabo koraya kaas oo ah hab dabiici ah in ilmaha caadiga ah.
Iyadoo in ilmaha colorblind loo yaqaano waxaa ka maqan ay sabab u tahay taas oo ilmaha ma kala saari karaa midabo sida caadiga ah ay arkaan guduud ah ama maariin ah halkii midabka cas iyo cagaar.
Waxaa shaki la'aan ma ka dhigan tahay in colorblind ah ma arki karaan midabada.
Colorblind laga yaabaa in aan kala saaro midabada waxaana laga yaabaa in ay khaldaan halka qaadaaya midabyo kala duwan.
colorblind A ma awoodo in la kala saaro midabada ilaa ay gaaraan 4 sano jir.
Qaar ka mid ah colorblind awoodin in ay arkaan midabada ay sabab u tahay achromatopsia cudurka loo yaqaan. Kaliya hal ilmaha ka mid ah 40 kun oo ilmaha waxa saameeya "achromatopsia".
Age Test for Colorblindness
About 4 sano jir ah carruurta ay awoodaan in ay imtixaan aragga midabka ay.
dhakhtar ayaa sida caadiga ah codsanayaa in ay guraan u dhexeeya khadadka midabka cas iyo cagaar ama erayo ama tirooyin.
Haddii ilmuhu waa inay awoodaan inay guraan tiradaasi midab ama khadadka markaas ilmaha cadeeyo baaritaanka aragga midabka iyo haddii aan markaas ilmaha waa colorblind.
baadhitaano kale oo badan ayaa laga qaaday dhibco colorblind inta midab tirooyinka la siiyo ilmahaaga si aad u ogaatid midabada natiijada cad haddii uu isagu / iyadu ma awoodo in uu aqoonsado qaababka midab siiyey in tirada ayaa noqon karta.
Tiradani waxay sida caadiga ah waa in midabada casaanka iyo cagaaran. Waan la soconaa in imtixaanka waa qaali.
Do not worry because with Vision test https://iristech.co/test-vision kaa caawin doona inaad ogaato haddii aad tahay colorblind ama aan bixin hal dinaar.
Taas micnaheedu ma aha in indha la midab ma arki karo midabada ama xadidaya awoodda shaqada aragtida midabka ah.
Waxaa kaliya xaqiiqada ah kaas oo sababa isbedel ayaa hidde gudbiya dhex hiddo ah.
Khubarada ayaa soo jeediyay in marka ilmuhu gaaro da'da ah 4 markaas waa in si loo hubiyo baaritaanka aragga midabka.
oo bara cadeeyo midab iyo sidoo kale kaa caawin si loo tilmaamo booska uu ka nalalka gaadiidka aan awoodin in la kala saaro midabka cas iyo cagaar.
Vision waa xalka ugu fiican ee aad colorblindness. Hel software oo aad awoodo si aad u aragto midabada sida caadiga ah oo aan blurriness kasta oo noqon doona.